ကျန်တဲ့ဆိုင်တွေကိုလည်း မျှပြီးအားပေးကြပါလို့ ပရိုမိုးရှင်းဆင်းခဲ့တဲ့ -အကြော်သည် သားငယ် – Sunday Journal Myanmar
မင်းသမီးဆိုတာ ဒီလိုဘုတ်အီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာက မကောင်းဘူးလေ"စိုးမြတ်နန္ဒာ"
တစ်ပြားမှမယူပြန်ရင် လည်း မိသားစုစားဝတ်နေရေးက ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ ဦးအောင်တိုး
Psychoဆန်ဆန်ဇာတ်ရုပ်မျိုးတွေ ရိုက်ကူးချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ “နန်းဆုဦး”
၀ါဆို့မျက်နှာကထန်နေတော့ တစ်ချို့ မာနကြီးတယ်လို့ထင်ကြတယ်၊ ဘယ်တော့မှလည်း အိပဲ့အိပဲ့ မလုပ်တတ်ဘူး ”လို့ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းမှုအကြောင်းမေးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရယ်ချင်မိတယ် ဆိုတဲ့ မိစန္ဒီ
တာမွေပလာဇာမှာ အဖေနဲ့ အမေက စိန်ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ဖူးတာက အမှတ်တရပါပဲ ဆိုတဲ့ ရတနာမိုင်
ဒေါင်းဆိုတာတမျိုးသားလုံးရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် တန်ဖိုးထားတာကြောင့် ဒီနာမည်ကို ပေးဖြစ်တာပါ ‘ဒေါင်း’
ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်ပြီး နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ ကိုယ့်မ်ိသားစုနဲ့ အဆင်ပြေအောင် နေနိုင်မယ့်သူကို ပြန်ချစ်မယ်ဆိုတဲ့ အမရာငြိမ်း
ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အခန်းနဲ့ ဆေးဖြတ်တဲ့ အခန်းက အခက်ခဲဆုံးပါပဲလို့ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်
အခုအချိန်မှာ သေရဲလားလို့ မေးရင် သေရဲပါပြီ- ပိုပို
ဗိုက်ဆာတယ်၊ချစ်တယ်၊အာဘွား အဲ့ဒီလိုစကားလုံးတွေကို ပြောရတာအကြိုက်ဆုံးပဲ ဆိုတဲ့ Rose Quartz
အခြောက်ပုံစံလုပ်ပြီးတော့ အမတွေကို နှောက်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုကြိုက်တဲ့-ပြေတီဦး
““သားလေးအတွက် အကယ်ဒမီ ရွှေစင်ရုပ်၁၁ဆု အမွေပေးမယ် ၊ မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီလိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူ ရှားမယ်ထင်တယ်”” အကယ်ဒမီ -စင်ရော်မောင်မောင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း ။
Reflection ဇာတ်ကားက Fashion နဲ့ Actionကို ပရိသတ်တွေအတွက် Entertainment အဖြစ်ရိုက်ပြထားတာပါဆိုတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
အကယ်ဒမီရွှေကြယ်ကို ဘုရားမှာ လှူဒါန်းတိုင်း ပရိသတ်အတွက်ပဲ ဦးစားပေးဆုတောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီနေတိုးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မြန်မာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့် သူတို့အတွေး၊ သူတို့အမြင်
အဖေများနေ့နဲ့ အဖေချစ်သမီးတွေ ရဲ့ အတွေးအမြင်
အဖေများနေ့နဲ့ အဖေချစ်သမီးတွေ ရဲ့ အတွေးအမြင်(Bella၊ ဟန်သီ၊ အကယ်ဒမီ စိုးပြည့်သဇင်၊ အမရာငြိမ်း၊ ထားထက် ထက်နှင့် ၀ိုင်းလေး)
KBS Drama မှာ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီးအဖြစ် တွေ့ရတော့မယ့် Bona
အတူရှိနေချိန်မှာ ကျွန်တော့် ကိုဂရုမစိုက်ဘဲ ဖုန်းပဲကြည့်နေ မယ်ဆိုရင်တော့မုန်းမိမှာပါ ဆိုတဲ့ Ha Suk Jin
ပရိသတ်တွေအတွက် ဆွဲဆောင်အားကောင်းလွန်းတဲ့ ရွှေဘုံနန်းစံပေါ်က စိတ်ဝင်စားစရာဘ၀များ
လက်ထပ်ပွဲကျင်းပဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ပရိတ်သတ်တွေကိုကြေငြာလိုက်တဲ့ So Ji Sub
လွတ်လပ်လန်းဆန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လမ်းပေါ်ကစတိုင်လ် မော်ဒယ်လ်-ခက်ခက်မောင်
လွတ်လပ်လန်းဆန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လမ်းပေါ်က စတိုင်လ်-မော်ဒယ်လ်-နေဒွေးအောင်နိုင်
Lotte ဟိုတယ် wedding Fair မှာတွေ့ရတဲ့ "မော်ဒယ် - နန်းခေးမား"
သင်္ကြန်မှာရေကစားရင်း အသားအရေမပျက်စီးဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေ
ဆေးသောက်စရာမလိုပဲ ရင်ပူရင်ဆာဖြစ်ခြင်းကို ဘယ်လိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်မလဲ ?
တစ်ပါတ်တာတွက်ဆသင့်ဘဝရဲ့ ကံကြမ္မာ (၁-၇-၂၀၁၈ မှ ၈-၇-၂၀၁၈ထိ)
တစ်ပါတ်တာတွက်ဆသင့်ဘဝရဲ့ ကံကြမ္မာ (၁၅-၆-၂၀၁၈ မှ ၂၂-၆-၂၀၁၈ထိ)
တစ်ပတ်တာတွက်ဆ သင့်ဘဝရဲ့ကံကြမ္မာ-(၂၉-၄-၂၀၁၈ မှ ၆-၅-၂၀၁၈ထိ)
တစ်ပတ်တာတွက်ဆ သင့်ဘဝရဲ့ကံကြမ္မာ (၈-၄-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၄-၂၀၁၈ထိ)
တစ်ပတ်တာတွက်ဆ သင့်ဘဝရဲ့ကံကြမ္မာ(၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၈-၄-၂၀၁၈)
ဆိုးဝါးပြင်းထန်လှတဲ့ H1N1 ရောဂါကို အံတုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်၊သရုပ်ဆောင် "ဆုလင်းရှိန်"
လောကဓံ နဲ့ သက်ကြီး အနုပညာရှင်ရဲ့ ဘဝဇာတ်စုံ
"Original Gangster" မှာ ကျွန်တော့်နာမည် မပါတာ စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ ထူးခြား
အသက် ၂၄ နှစ်ကျော်မှ ရည်းစားထားလိုက်တာ အရမ်းမှန်တယ်လို့ထင်မိတယ် "ဆန်းသစ်လ"
အသက်သုံးဆယ်ကျော်လာတဲ့အတွက် မြန်မာဝတ်စုံပဲဝတ်ဖြစ်တော့တဲ့ >>>အေးဝတ်ရည်သောင်း
ဒါရိုက်တာတွေက လူသတ်မှာလား၊ရည်းစားနဲ့တွေ့မှာလား ဆိုပြီးနောက်ကြတယ်-ယဉ်လတ်
ကိုယ့်အရပ် ကိုယ့်ဒေသက သင်္ကြန်ကို ပိုပျော်ပါတယ်၊ ကိုကြီးကျော်သီချင်းနဲ့ ကရတာလည်း အမှတ်တရပါပဲ ဖြူဖြူထွေး
ငယ်ငယ်ကတည်းက မအူဝဲရဲ့နှလုံးသားတရားစီရင်ခန်းကို အခါတစ်ရာလောက်ကြည့်ခဲ့တယ်-ရွှေရည်သုန်သုန်"
““အရင်က ပရိုဂရမ်မာ ဖြစ်ချင်ပေမဲ့ အနုပညာအပေါ် အရမ်းစိတ်ထက်သန်လွန်းလို့ ဒီလောကထဲ ရောက်လာခဲ့တာပါ”မျက်နှာဖုံးရှင် ကူကူးဇင်အောင်
အရင်က မန္တလေးမှာ လူမသိသူမသိရုန်းကန်ခဲ့ရပေမယ့် အခုတော့ နေရာတစ်ခုရလာပါပြီ-လီလီကျော်ခိုင်
ကျန်တဲ့ဆိုင်တွေကိုလည်း မျှပြီးအားပေးကြပါလို့ ပရိုမိုးရှင်းဆင်းခဲ့တဲ့ -အကြော်သည် သားငယ်
August 11th, 2017 Gossip
ကျွန်တော့်ဆိုင်မှာချည်းအားမပေးဘဲ ကျန်တဲ့ဆိုင်တွေကိုလည်း မျှပြီးအားပေးကြပါလို့ ပရိုမိုးရှင်းဆင်းခဲ့တဲ့ Myanmar Idol Winner -အကြော်သည်ကြီး သားငယ်
Myanmar Idol နဲ့ အတူ Winner အဖြစ် ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုတွေကို အပြည့်အ၀ရရှိထားပြီး တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီး စီစဉ်နေတဲ့ သားငယ်နဲ့ တွေ့ဆုံခိုက် ခုလိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
“တစ်ကိုယ်တော်ခွေအတွက်ကတော့ Body အနေနဲ့ ပြီးသွားပါပြီ။ အတီးပိုင်းလည်း ပြီးသလောက်ရှိပြီ။ အခုတော့ ဆိုဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ ခုရက်ပိုင်းမှာ ဆိုဖို့လုပ်နေပါတယ်။ တေးရေးတွေကတော့ Idol က ဖိတ်ထားတဲ့ တေးရေးဆရာအသစ်တွေရဲ့ သီချင်းတွေပါ ပါမယ်။ နောက် တခြားအပ်ထားတဲ့ တေးရေးတွေလည်းပါပါတယ်။ ဘယ်သီချင်းကို ဆိုဖြစ်မယ်မသိသေးတော့ တေးရေးကိုတော့ သေချာမပြောပြနိုင်သေးပါဘူး။ တစ်ကိုယ်တော်ခွေမထွက်သေးတဲ့အတွက် ပွဲတွေမှာ ကျွန်တော်တို့က သူများသီချင်းတွေဆိုနေရတာလည်း အားနာနေရပါပြီ။ သူတို့ရဲ့အနုပညာနဲ့ ကျွန်တော်တို့က ပိုက်ဆံယူသလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အသစ်မထွက်ခင် အဟောင်းလေးတွေပဲ နားထောင်ပေးနေရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ။ ကိုယ်ပိုင်သီချင်းတွေအတွက်လည်း စီစဉ်နေပါပြီ”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အကြော်သည်လေးအဖြစ် အားလုံးက အားပေးခြင်းခံခဲ့ရသူမို့ လက်ရှိအချိန်မှာ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေတိုးချဲ့ဖို့ရှိလဲဆိုတာ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့တော့ “ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြော်လုပ်ငန်းကတော့ အရင်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်မိန်းမဘက်က လုပ်ငန်းပါ။ ကျွန်တော်တို့က ကပ်လုပ်ရတာပါ။ စီးပွားရေးကတော့ အရင်တုန်းကအတိုင်းပဲ။ ရောင်းရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ပိုပြီးအားပေးကြတယ်၊ ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့လည်း ပိုပြီးရောင်းရပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်း ဒီကနေတောင်းဆိုပါရစေ ကျွန်တော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲ ၀ယ်နေကြတော့ ဘေးဆိုင်တွေ အရောင်းပါးသွားတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ တခြားဆိုင်တွေကိုလည်း မျှပြီး အားပေးကြပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်”လို့ ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရင်သွေးမရှိသေးတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံကိန်းကို ဘယ်လိုစီစဉ်ထားသလဲဆိုတာ မေးမြန်းကြည့်လိုက်တော့ “ယူမှာပေါ့ဗျာ၊ ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ အရင်က အကြော်သည်လေ၊ မပြေလည်ဘူး ။မပြေလည်တော့ ကလေးရလာမယ့်မျိုးဆက်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းကန်းကန်းလေးဖြစ်စေချင်တယ်။ ရုန်းကန်နေရတာမျိုးကြီး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ အခု ကျွန်တော့်ကို ပရိသတ်တင်လိုက်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပေါ့။ ချောင်ချောင်လည်လည်လေး ဖြတ်သန်းလာနိုင်ပါပြီ။ အိမ်ကလေးလည်း ၀ယ်နိုင်ပါပြီ။ ကားလေးလည်းရှိပြီဆိုတော့ ယူမှာပါ။ အသက်လည်း ခုမှ ၂၃ နှစ်ဆိုတော့ ကလေးယူဖြစ်တော့မှာပါ။ ဘယ်နှစ်ယောက်လည်း မပြောတတ်ပေမယ့် များရင်လည်း များသလောက်ယူဖြစ်မှာပါ”လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
Next article တရားဓမ္မနဲ့ပျော်နိုင်ပါ့မလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်မိတယ် >>>ကော်နီ
Previous article Sunday Journal အင်တာဗျူးကိုလာပြကတည်းက သူ့ကိုပရိသတ်ကြိုက်မယ်ထင်ခဲ့တယ် >>၀တ်မှုံရွှေရည်
Every Sunday is your own leisure time and entertainment day in your life.
Copyright 2018©Sunday Journal. All rights reserved.